Hausi kuzombokundikana kusvikira warega kuedza. - Mike Ditka - Anodzokorora Pedia
Hausi kuzombokundikana kusvikira warega kuedza. - Mike Ditka
Hakuna chokwadi chakakura kudarika chokwadi chekuti kushanda nesimba nguva dzose kunokohwa kwazvinobatsira. Hupenyu huzere nekukwira nekudzikira. Kuwana zvaunoda kana kuti uri kutarisira mberi zvinogona kunge zvisiri nyore. Izvo hazvimboreve kuti isu tinofanira kukanda mapfumo pasi. Kubata nekushivirira uye kuramba uchishanda nesimba kunobatsira mukuzadzisa chinangwa chako.
Iwe hausi wekurasikirwa kana usati wazadzisa chinangwa chako. Asi iwe zvechokwadi uri akarasika kana iwe warega kuedza. Mumwe anogona kufunga kuti pane mwero kune iyo iwe yaunoyedza. Asi chokwadi ndechekuti tinofanirwa kusundidzira zvatisingakwanisi.
Ehe, rationality yemamiriro ezvinhu inofanira kuyerwa, asi isu tinofanirwa kunzwisisa kuti kana rimwe gonhi rakavhara rimwe gonhi rinovhurwa. Kuda kwedu kuwana chimwe chinhu hakufanirwe kuderedzwa. Tinofanira kugona kutsvaga mikana mitsva nguva dzese kuitira kuti tigokwanisa kuenda kumberi muhupenyu.
Izvo zvaunofunga sekurasikirwa inongova zvikamu muhupenyu izvo iwe zvechokwadi uchaikunda kana iwe ukaedza. Naizvozvo, usambozvirega pachako uye chengeta tariro dzako dzakakwirira. Kufunga kunotikurisa nesimba rekuita zvirinani. Isu tinobva taona iwo mwenje pakupera kwemugero uye totanga kushanda takananga kwachiri.
Usamboita chero munhu akakuudza kuti warasika. Vaudze kuti iwe uchawana nzira yekubuda uye tora senzira yekuita zvirinani. Wako zviito zvichataura zvinonzwika kupfuura mazwi uye vazhinji vachatarira kwauri kuti utsungirire.
Us kurega Quotes
Akakurumbira Quotes Pamusoro pekuyedza
Akakurumbira Short Quotes
Kukurudzira Yemitambo Quotes
Quotes Zvekuedza Zvako Zvakanakisa
Mapfupi Emitambo Quotes